Calanka.com – Wasiirka difaaca Britain oo sheegay in eysan dalka kusoo laaban karin xubnihii ISIS ku biiray
MUQDISHO: Ganacsiga suuqa weyn ee Bakaaraha oo saakay si buuxda u furan
SUURIYA: Duqeymo lagu dilay dad kor u dhaafaya 250 ruux iyo carruur qeyb ka ah
Wasiirka maaliyadda oo sharxay muhiimadda ay leedahay qaadista canshuurta barriga: DHAGEYSO
UK: Dhallinyaro soomaaliyeed oo dil iyo dhaawac xalay loogu geystay magaalada London
Wasiirka difaaca Britain oo sheegay in eysan dalka kusoo laaban karin xubnihii ISIS ku biiray
in Dibedda — By Admin —	December 7, 2017 -- 62 Views
British Isis militant Ibrahim Hussein identified in video
Ma jiro muwaaddin Britain u dhashay oo u soo dagaallamay kooxda isku magacawday Dowladda Islaamiga ah oo loo oggolaanayo inuu dalka ku soo laabto, sidaa waxaa yiri xoghayaha difaaca.
Wareysi uu la yeeshay wargeyska Daily Mail, ayuu Gavin Williamson ku yiri: “Aragtideydu waxay tahay in argagixiye dhintay uusan wax dhib ah u geysan karin Britain.”
Ugu yaraan 800 oo UK u dhashay ayaa aaday dalalka Siiriya iyo Ciraaqsi ay ugu dagaallamaan IS, iyadoo 130 ka mid ah dadkaasi lagu dilay dagaalka.
Dagaal-yahannada Britain u dhashay ee u qaxay dalalka kale ayuu sidoo kale sheegay in la qaban doono oo aan loo oggolaan doonin in UK ku laabtaan. Wuxuu intaas raaciyay in sidoo kale aysan jirin meel ay ku badbaadayaan oo dibadda ku taalla.
Sidoo kale wasiirka horumarinta caalamiga ah Rory Stewart, ayaa sheegay in habka keliya loola dhaqmayo dagaal-yahannada Daacish ee UK u dhashay kuna sugan Siiriya ay tahay in la dilo.
Feker ta aka duwan waxaa qaba Max Hill QC, oo ah falanqeeyaha madaxa bannaan ee sharciga argagixisannimada, wuxuu sheegay in muwaaddiniinta Britain ee ugu biiray Daacish iyagoo aan waxba ogeyn inay tahay inaan la ciqaabin oo taa beddelkeeda marka ay soo laabtaan lagu dhex daro bulshada.
Labo sano kahor, dowladda dalkaasi ayaa warqad saddex-sadar ka kooban u dirtay Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay, iyaodo ku codsaneysa in la dilo xagjirka ka soo jeeda magaalada Cardiff Reyaad Khan.